अघि बढ्ला त बूढीगण्डकी आयोजना ? | Himalaya Post
Posted by Himalaya Post | ७ श्रावण २०७८, बिहीबार १९:१९ |
रमेश लम्साल, काठमाडौँ – लामो समयदेखि चर्चामा मात्रै सीमित भएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको कामलाई गति दिन सरकारले सक्रियता देखाएको छ । राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाका रुपमा रहेको भनिए पनि आशातितरुपमा काम अगाडि नबढेपछि सरकारले त्यसलाई अगाडि बढाउने गरी आवश्यक पहल थालेको हो ।
कूल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएको नै सात वर्ष पूरा भएको छ । सन् २०१४ मा फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले आयोजनाको डीपीआर तयार पारेको थियो ।
यो सन्दर्भमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले आज मन्त्रालयका सचिव र आयोजना प्रमुखलाई बोलाएर तत्काल आयोजनाको रोकिएको काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिइन् ।
सरकारी अधिकारी तथा सम्बद्ध पक्षसँगको छलफलमा मन्त्री भुसालले लामो समयदेखि आयोजनाको काम किन अगाडि बढ्न सकेन ? भन्ने जिज्ञासा राखेकी थिइन् । स्थानीय आयोजना प्रभावितको माग सम्बोधन गर्न, उनीहरूलाई नियमानुसार खुशी बनाएर काम शुरु गरिहाल्नुपर्ने मन्त्री भुसालको भनाइ छ ।
स्थानीयवासीले सुस्त गतिमा अगाडि बढेको पुनर्वास र घरगोठको मुआब्जाबारे पनि शीघ्र निर्णय गर्न निर्देशन दिएका थिए । बूढीगण्डकी आयोजना सरोकार समितिले यसअघि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र ऊर्जामन्त्री भुसालसँग भेट गरी समस्या समााधान गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।
घर तथा जग्गाको मुआब्जा ह्रासकट्टी नगर्न वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा नै उल्लेख गरिएको आयोजना प्रभावितको भनाइ छ । स्थानीयको मागअनुसार मन्त्री भुसालले ह्रासकट्टीबापतको रकम जनतामा जाने पैसा भएकाले नकाट्न आग्रह गरिन् ।
“आखिर जनता नै हुन्, उनीहरुले कर तिरेकै छन् । त्यही करबाट हामी चलेका छौँ । राज्य चलेको छ भने जनतलाई किन मर्का पार्ने”, मन्त्री भुसालको भनाइ थियो । नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई आवासको हक दिएकाले राज्यले आयोजना प्रभावितलाई सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गर्न सहजीकरण गर्ने उनको भनाइ छ ।
स्थानीयवासीले आयोजनाको नाममा आफूहरूलाई समस्यामा पारिएको भन्दै गुनासो गर्दै आएका छन् । गोरखा क्षेत्र नं १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य हरि अधिकारी नेतृत्वको स्थानीयवासीको प्रतिनिधिमण्डलले आयोजना शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन र सहजीकरण गर्न माग गरेको थियो । बूढीगण्डकी सरोकार समितिका अध्यक्ष जगन्नाथ खतिवडाले आयोजना निर्माण हुने भनिएकै लामो समय भए पनि काम शुरु नभएको भन्दै चिन्तामिश्रत गुनासो गरेका थिए ।
आयोजना प्रभावितको पुनःस्थापना गर्ने गरी जलाशय वरिपरि चक्रपथ बनाउने योजना अगाडि सारिएको भए पनि हालसम्म कुनै काम शुरु हुन सकेको छैन । “पुनर्वास र घरगोठको मुआब्जाको काम तत्काल अघि बढाउनुस्”, मन्त्री भुसालले भनिन्, “जनताले अपनत्व महसुस गर्ने गरी काम गर्नुपर्छ । त्यसतर्फ लाग्नुस् ।”
सो क्रममा मन्त्री भुसालले सरकार आयोजनालाई अघि बढाउन गम्भीर रहेको र सोहीअनुसार पहल गर्ने विश्वास व्यक्त गरेकी थिइन् । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना पुनर्वास तथा पुनःस्थापना इकाइका प्रमुख कृष्णबहादुर कार्कीले आयोजनाको स्थानीय काम अघि बढाउन आर्थिकरुपमा कुनै समस्या नरहेको जानकारी दिँदै हाल उत्पन्न कानूनी तथा प्राविधिक समस्या समाधानमा तीव्रता दिइने बताइन् । फिल्डफुबमा विवरण भएका तर लालपुर्जा नभएका जग्गा, ह्रसकट्टी, भौतिक संरचना र घरगोठका विषयमा शीघ्र निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै आज मन्त्री भुसालसँग सोही विषयमा छलफल भएको संयोजक कार्कीको भनाइ छ ।
उनले मन्त्रीको निर्देशनअनुसार तत्काल यससम्बन्धी रोकिएका कागजातलाई प्रक्रियामा लैजाने बताए । आयोजना प्रभावितमध्ये अन्यन्त्रको मुआब्जा वितरणको काम भइरहेको भए पनि धादिङको खहरे बजार र गोरखाको आरुघाट बजारको विवादका कारण अगाडि बढेको छैन । सरकारले तय गरेको मुआब्जामा स्थानीयवासीले चित्त बुझाएका छैनन् र पुनरावलोकनको माग गर्दै आएका छन् । रासस
Previousमैलो टक्टक्याएर अघि बढ्यो भने जनताले पत्याउने कम्युनिष्ट पार्टीलाई नै हो : नेता नेपाल
Nextजसपा आधिकारिकता विवाद : निर्वाचन आयोगले बोलायो कार्यकारिणी सदस्य
११ मंसिर २०७५, मंगलवार १९:४१
१४ कार्तिक २०७४, मंगलवार ०७:०२
सावधान ! यी नम्बरबाट आएका फोन उठाउँदा ठगिनु होला नि !
१० मंसिर २०७४, आईतवार ०९:१६
एनआईसी एसिया बैंकको नयाँ शाखा मकवानपुरको भिमफेदीमा
२५ फाल्गुन २०७४, शुक्रबार १५:३०